Sidee Looga Furo Account-ka Websaydhka Twitter-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 545
para barkinta xisaabtaada shabakadda, Isticmaalaha Twitter-ka: Wuxuu ubaahanyahay inaad gasho koontadaada Periscope, guji astaanta astaantaada oo dooro Settings ka menu-ka soo-baxa, guji Deactivate account.
Ka dib markaad gujiso Korantada xisaabta, sanduuq wada hadal qaabaysan ayaa ka muuqda shaashadda, Isticmaalaha Twitter-ka ayaa riixaya Deactivate si loo xaqiijiyo joojinta Koontada. Marka hawsha la dhammeeyo, Isticmaaluhu mar dambe ma laha xisaab Twitter oo firfircoon.
Markuu Isticmaalaha Twitterku doorto xisaab Deactivate, ayaa la weydiiyaa xaqiijinta go'aankaaga in la baabi'iyo. Haddii aad doorato inaad Dejiso Xogta Shakhsiyeed, tilmaame xamuul ah ayaa soo baxaya inta codsigaaga laga shaqeynayo; dhammaystiray dalabkaaga oo wuxuu bilaabayaa inuu soo dejiyo fayl xogtaada ah.
Ka bax Koontadayda 'Periscope'
Haddii Isticmaalaha Twitter-ka lumiyay mobiladiisii oo waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo Koontadaada Periscope; Ujeedadaas awgeed, waa inaad raacdaa nidaamkan: Raac tallaabooyinka adoo adeegsanaya qalab iOS ama Android ah; Haddii aad ku gasho Periscope koonto Twitter ah, u gal goobaha Twitter ee kombuyuutarkaaga.
Xullo Kala noqosho marin u dhiganta Periscope; Xullo Ka noqo marinka Twitter-ka ee macruufka ama Twitter-ka ee Android, tani waxay kuxirantahay aaladda uu Isticmaalaha leeyahay. Ka dib markaad ka soo degsato dalabka 'Periscope' mobilkaaga cusub, gal koontadaada Periscope.
Ugu dambeyntii, xulo Profile, Isku xidhka iyo Xidhitaanka fadhiga dhammaan qalabka. Hadda oo adeegsadaha Twitter-ka uu u hoggaansamay dhammaan habraacyada looga baxayo Account-kiisa 'Periscope Account', wuxuu heystaa ikhtiyaari ah inuu ka soo galo moobaylkiisa cusub.
ABUUR HALISTA TWITTER STREAM
para abuur durdur, Isticmaalaha Twitter-ka waa inuu: Guji tabka Gudbinta, guji Abuur gudbinta, geli meelaha loo baahan yahay: Magaca gudbinta, Qeybta: Sideed ku tilmaami lahayd gudbintaada? iyo isha.
Isticmaalaha Twitter wuxuu u baahan yahay xulashada a Xulashada maqalka: Mid guud ama mid gaar loo leeyahay; dooro ikhtiyaar ikhtiyaar ah: Isla markiiba bilow ama goor dambe bilow; fur Nidaamyada horumarsan; fur Xaddidnaanta Mawduuca: Ku dar ama Ka-saar.
Embed video laga bilaabo encoder ilaa isha oo hubi in soosaaraha horudhaca uu muujinayo fiidiyow; Adiga oo gujinaya Abuur gudbinta, Isticmaalaha Twitter-ka ayaa leh ikhtiyaar uu ku doorto: Isla markiiba bilow ama Bilow goor dambe.
Tweet oo dhammee gudbinta barta Twitter
Barta Twitter, Isticmaaluhu wuxuu ikhtiyaar u leeyahay Tijaabi warbaahin, ka qaybgalka nidaamka soo socda: Guji tabka Gudbinta; dhagsii warbaahin jirta; Dhagsii badhanka Tweet-ka waxaadna diyaar u tahay inaad khadka tooska ah ka gasho.
Ku saabsan joojiso Gudbinta, Isticmaalaha Twitter-ka wuxuu ubaahan yahay inuu raaco nidaamkan: Guji tabka Gudbinta, dhagsii gudbinta jirta, tag qeybta hoose ee daaqada aqoonsiga gudbinta.
In la xidho, Isticmaalaha Twitter-ka ayaa riixaya Badhanka dhammeeya; Marka dhammaan shuruudaha nidaamka la buuxiyo, gudbinta waxaa lagu soo saari doonaa Twitter-ka si loogu wada raaxeysto dhammaan dadka isticmaala Twitter-ka barta Twitter-ka.
1 Ka bax Koontadayda 'Periscope'
2 ABUUR HALISTA TWITTER STREAM
3 Tweet oo dhammee gudbinta barta Twitter